सर्वश्रेष्ठ टेपर रड्स निर्माता र कारखाना | Gimarpol
लाभ: घरेलू प्रसिद्ध ब्रान्ड, उच्च गुणस्तर, कडाईका साथ निरीक्षण र परीक्षण, राम्रो बिक्री पछि सेवा।
वितरण समय:ddavs pavment पुष्टि पछि
टुक्रा WeightApprox (किलोग्राम)
मिलीमीटर (मिमी) खुट्टा
1400 ''6 ' 100 435
1600 ''२ '' 100 495
2000 ''6 ' 100 620
2200 ''२ '' 100 680
3500 ११'5 ' 100 1070
4000 १''१ '' 100 1220
4500 १''8 ' 100 1370
Q1: के हामी बटन बिट रंग चयन गर्न सक्छौं?
Q2: के हामी बटन बिटमा हाम्रो मार्कमा परिवर्तन गर्न सक्दछौं?
Q3: तपाईं पछि बिक्री सेवा र वारंटी सेवा छ?
Q4: के म तपाईंको कम्पनीलाई विश्वास गर्न सक्छु?
अघिल्लो: कोइला खानी डन्डा
अर्को: शान्क एडाप्टर